Ukwenza kunye nokusetyenziswa kwe-PVD-camera titanium aluminium Sputtering
Ngokwesiko kusetyenziswa indlela yokuphosa kunye nomgubo wokunyibilikisa isinyithi ukuvelisa ithagethi yealuminium ingxubevange.
Indlela yokuphosa iithagethi zeetayitile yealuminium alloy ayinakuphepha ukunyuka kunye nokuncipha. Ubungakanani obukhulu beetanium aluminium iphayiphu kunye ne-ingots ayinakuqinisekisa ukutywinwa kunye nefuthe lokungena manzi xa kusenziwa ityhubhu ejikelezayo, nanjengoko udonga lweetyhubhu lumile, udonga ubukhulu itshintsha Thin, imingxunya evulekileyo kunye yokuncipha okoko nje kukho umngxunya odityanisiweyo, ukutywina kuya kuba kubi, ezikhanyayo ziya kuvuza, ityhubhu ekujoliswe kuyo iya kuqala ukukhupha, okanye ubuninzi bokungcola buya kuthatha inxaxheba ekuphenduleni kwaye kubangele ukuba ifilimu iwele okanye umbala ungalunganga..Kwiimeko ezinzima, amanzi atofelwe ngqo kwisisu sokuncipha ukuya kwigumbi elingena, nto leyo eya kungcolisa kwisisu yokwenene kunye neyunithi cleaner.
Imveliso yenkqubo yokunyibilikisa isinyithiIthagethi yealuminium titaniumAkukho ngxaki ye-porosity kunye ne-shrinkage, kodwa ukusuka kwindawo yokujonga imicroscopic ye powder metallurgy, ikwangumbandela wokungena, ke ukuba ufuna ukwenzaIthagethi yeTitanium ejikelezayo ityhubhu, Izinto ezifunekayo zokuxinana kwezinto zingqongqo kakhulu, uxinano kufuneka lube ngaphezulu kune 98%, kodwa ukuhlangabezana neemfuno zoxinaniso akuthethi ukuba inokusetyenziswa., Uxinzelelo lwangaphakathi lwe-titanium aluminium ingot inkulu, kwaye kulula ukuwa, kwaye ayinakusetyenziswa njengethagethi ejikelezayo. Ke ngoko, zininzi izinto ezifunekayo ekuvelisweni kwepowder kunye nakumlinganiso wamasuntswana .. Nokuba ezi meko ziyafezekiswa, i-powder metallurgy titanium aluminium ring kufuneka ibotshelelwe kwityhubhu yentsimbi okanye ityhubhu ye-titanium. Ngenxa yokwanda kokuqina kokuqina kwe-titanium aluminium, Ukwanda kwethagethi yendawo kungafikelela kwi-zero ngexesha lokuchamela..5 ～ 1m, Ke indlela yesiqhelo yokubopha ingots ayinakho ukusombulula le ngxaki. Ukwahlulahlula kweetanium kunye nealuminium ebopha ingots kwenzeka, kwaye amandla obushushu obuso ekujoliswe kuwo awunakwenziwa kwaye aqhume..Nangona kunjalo, ibhondi ehambelana ngokuqinileyo ayithembekanga, kwaye umgangatho weplasma otshiziweyo we-titanium aluminium ekujolise kuyo ujongekile..
Ukuhonjiswa okuhonjisiweyo kwenyuka igolide kwiwotshi, izacholo, kunye nemizi-mveliso yamehlo. Kutshanje, iimfuno ezininzi aziqulathanga khabhon kwaye uqhubeke wenze umbala ongaphantsi we-rose kufutshane nobuso benyuka igolide .. Ngokoluvo lwethu, I-TiCN ayisakwazi ukufikelela kwiimfuno. I-TiAlN sesona sisombululo sigqibeleleyo. Ubucwebe bokubukela ubuncinci abunayo iimfuno zobukhulu befilimu kunye ne-gloss. Uninzi lwazo lusebenzisa iarc titanium aluminium ekujolise kuyo ukufaka i-TiAlN. Iwotshi ephezulu yohlobo lwewotshi ifuna ubukhulu obungaphezulu kwe-1um kunye ne-gloss. Ayikwazi ukuhla.I-arc ichaphazeleka ngamaconsi kwaye ayinayo inzuzo kwifilimu egudileyo kunye nengqindililiO'KellyIngabonakala kwingxelo ye-odolo yangoku yokubonelela ukuba indlela engcono kukufaka i-TiAIN ngokujolisa kwithabhu ejikelezayo, ayisiwo kuphela umbala osondeleyo kwigolide yegolide, kodwa isilungiseleli seglosi asizukuchaphazeleka emva kokuba ubukhulu bonyukile..
Ngaphambili: Eyona nto iphambili kulwakhiwo lwenqwelomoya
Okulandelayo: Yintoni ujikelezo lweethagethi zokuSasaza？